Ithagethi kunye noJohn Derian Yazisa ngeHalloween Line - Uyilo Lokuphefumlela
Ithagethi kunye noJohn Derian Yazisa ngeHalloween Line
Derian ngezinto ezivela kumgca.
Nokuba umi phi na ekuhombiseni ngeHalloween, ayisiyongxoxo mpikiswano ukuba ukuhonjiswa kweholide kuhlala kuqhuba i-gamut, ukusuka kwindawo eyoyikisayo ngaphezulu kwezinto zendalo ezithobekileyo. Kwaye ngelixa ndingathengiswanga kwi inflatable ingca accents umkhwa, kulo nyaka kukho umgca omnye weSpooky Season Ndonwabile ukubuyela umva: Namhlanje, ekujoliswe kuko kubhengeza ingqokelela yeHalloween kunye noJohn Derian, kwaye injenge-chic njengoko kungumbhiyozo.
I-Derian, umphathi we-decoupage emva kwevenkile ezithandwayo zeNew York City kunye nokuqokelela kunye no-Astier de Villatte, wasungula iziqwenga zakhe zokuqala kwitafile yethagethi yonyaka ophelileyo, njengenxalenye yenkqubo yomthengisi yeminyaka engama-20. Ngeli xesha, ubuyile phantse nezinto ezingama-50 eziqukethe izinto zeHalloween ezinje ngamathambo kunye nezigcawu, zonke zitsalwe kwingqokelela yakhe ebanzi yeencwadi zokuvuna kunye nezakudala kunye namaphepha.
Izinto zethebhulethi ezivela kwingqokelela.
Ndiyayithanda iHalloween kunye nayo yonke imilingo kunye nokudlala, utshilo uDerian Indlu entle . Kwaye ndiyayithanda ingqokelela ayisoyiki-yoyikisa-yoyikisa ngakumbi. Ndinogcino olukhulu, kwaye oku kundinike ithuba lokusebenzisa eminye imifanekiso ‘emnyama’ kwingqokelela yam.
Ezi motifs zichithwe kumacwecwe, iipleyiti, iifaskoti, imiqamelo, nokunye okuninzi (kubandakanya amathambo agxunyekweyo!) Kwingqokelela entsha, eya kuthi yehle ngo-Okthobha 10. Ndiza kuxhoma izibane egadini yam, ndonwabise ngeglasi, ndisebenza kwiipleyiti, ndibeka iishelfu esofeni yam, ndomisa izitya ngeetawuli zeti, kwaye, ewe, ngokuzingca ndibonise amathambo am amatsha anemitha ezi-5, uDerian uthi ngehombo yakhe yeHalloween. Zininzi izinto ezimnandi, ezahlukeneyo ezahlukileyo ezisebenza kunye. Ukuba kufuneka ukhethe into enye, uDerian ucebisa isitya seelekese, ibhegi yetote, okanye ikhandlela elinuka kamnandi.
Ukuhambisa iipleyiti kunye neeplatifti ezineempawu ezithandekayo.
Yeyona ndawo yokungena efanelekileyo kubalandeli beDerian abanokuthi bangabinakho ukukhupha ngakumbi kwiitreyi zakhe ezidumileyo zedrophu kodwa basafuna isiqwenga sophawu lwentengiso yakhe-leyo, uDerian athi, ingena ngokugqibeleleyo kule holide. Xa ndicinga ngomsebenzi wam, ukuqokelelwa kwemifanekiso, kunye nenkqubo yokuyila, ndicinga ukuba ndiza kupela izinto zam, uyachaza. Lo mbono undikhuthaze kuyo yonke le nkqubo yoyilo. Kwaye ndiyazithanda zonke iinkcukacha, ukusuka kubuhle obunobuhle kunye neekotoni ezithandekayo kunye nelinen ukuya kumnandi melamine, iglasi eprintiweyo, kunye nezibane ezigqobhoziweyo zentsimbi. Sikwazile ukusebenzisa izinto ezininzi ezahlukeneyo, senza ingqokelela ebanzi kakhulu.
ubomi bokwenyani amabali endlu
Cwangcisa ngaphambili ezinye zeentandokazi zethu apha ngezantsi (umgca uqala ngo-Okthobha 10) okanye Jonga yonke ingqokelela apha .
Ivenkile kaJohn Derian yeThagethi
UMateyu Perry Uthengise indlu yakhe yaseLos Angeles
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Nazi ezona ziNdawo ziQeshisayo zaMandla ziMangalisayo
Isiseko sobugcisa sikaPeter Marino sivulelekile kubakhenkethi
Ungahlala kwihotele esuka kwiDisney +'s 'Loki' UFrank Lloyd Wright Housewalk ubuyile
Ngaphakathi kwigumbi elinempilo likaLiza Minnelli kwiSekethe yowe-1973 Le Ndlu ineNdlu enemibala iphupha lethu lokubaleka ehlotyeni
Esi sigxina saseLondon ngoku siSakhiwo sokuHlala
Ikhaya loMyili elingaYilwanga ngaphezulu '
Ithagethi ithengisa ezona ndawo zisemnyango zeHalloween
Ithagethi sele ithengisa iimpahla zeHalloween
Nalu uQeqesho lwakho lokuQala kwiHolor's Halloween Decor
Nantsi eyakho yokuQala ukuHombisa kwiThagethi yeHalloween
I-Pottery Barn Ilahle nje ingqokelela yeHalloween
Umgca omtsha wezityalo zikaHilton Carter ngeThagethi ulapha
Ukudityaniswa kombala ngepinki
Ikrismesi yomthi wekrisimesi
imibala yepeyinti yokulala elungileyo